VL OMNI Announces Partnership Excellent Zephyr | Wire News Services
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » IVL OMNI Yazisa ubuDlelwane obuBalaseleyo uZephyr
IVL OMNI Yazisa ubuDlelwane obuBalaseleyo uZephyr
Februwari 2, 2021
by Umhleli woLawulo lwe-eTN
I-VL OMNI kunye no-Zephyr oGqwesileyo babhengeza ubambiswano olusandula ukusekwa ukuzisa ukudityaniswa kwedatha e-agile kunye neyoyikekayo kubarhwebi abasebenza e-United Kingdom.
OAKVILLE, ONTARIO, CANADA, ngoFebruwari 2, 2021 /EINPresswire.com/ - VL OMNI, inqaku le-agile kwiqonga lokudibanisa idatha yamajelo amaninzi, libhengeza ubuhlakani balo kunye Zephyr ogqwesileyo. Ubambiswano olusandul 'ukusekwa phakathi kwe-Zephyr egqibeleleyo kunye ne-VL OMNI iya kwandisa ukufikelela kwe-Zephyr egqwesileyo kwizicelo ezingaphezulu ngelixa ivumela abathengi be-Zephyr egqibeleleyo ukuba bahambelane nokuhamba kwedatha kunye nemithetho yeshishini kuhambo olunye kwiqonga lokudibanisa, eliguqukayo nelinokuqina kwedatha.
Zombini ezi nkampani zinobambiswano olufanayo ne-LS Retail, i-Arhente yeNgxelo (IDHL), kunye neShipstation. Ubambiswano noZephyr oGqwesileyo luya kuvumela i-VL OMNI ukuba yandise ukunikezela kwayo ngokuhambisa idatha ngaphandle komthungo ngokusebenzisa izibonelelo zabathengisi njengoko bekhulisa amashishini abo ngelixa ngaxeshanye benceda abathengi beZephyr abaGqwesileyo ngoku nakwixesha elizayo.
"Iqela le-VL OMNI livuya kakhulu ukubhengeza ubambiswano lwethu no-Zephyr oGqwesileyo," utshilo uTorrey Lapenskie, iiNkqubo zokuKhula kwi-VL OMNI. “Zombini eziGqwesileyo Zephyr kunye ne-VL OMNI zisebenza kwi-ecommerce kunye ne-multichannel yentengiso e-United Kingdom, kwaye bobabini bayalibona ixabiso lokwenyani lokudala i-agile, scalable, high-functional applications ezisebenza kwiqela elikhethekileyo labarhwebi. Zombini eziGqwesileyo Zephyr kunye ne-VL OMNI sele zikulungele ukunceda Abarhwebi besisombululo seshishini bavune imivuzo yokusebenza ngokukuko. ”
Malunga ne-VL OMNI:
I-VL OMNI ngumlingani weqonga lokudibanisa ixesha lokwenyani, i-agile, kunye ne-iPaaS (Integration Platform-as-a-Service) yokudityaniswa kwedatha. Sinika amashishini amandla okukhawulezisa ukukhula ngokudibanisa iinkqubo zawo, amajelo, amaqabane kunye nokusetyenziswa kunye ngeendlela ezibaluleke kakhulu kubo. Abarhwebi abaphezulu behlabathi abaninzi bayasithemba ukuba sihambisa idatha ngaphandle komthungo kwiziseko zophuhliso njengoko bekhula, besanda kwaye bekhawulezisa ishishini labo.
Qala incoko namhlanje ngo http://contact.virtuallogistics.ca/contact-vl-omni/ .